Kedu ka esi emepụta plywood na-enweghị formaldehyde? | Shuyang
Ìgwè / WeChat: 15151188808
Ngwá ụlọ ọkwa
Film ihu Plywood Factory Tour
Kedu ka esi emepụta plywood na-enweghị formaldehyde?
Ngwongwo ogwe osisi na-amasị ndị na-eri ihe n'ihi nnukwu arụmọrụ ya na ọnụahịa ya, ọdịdị ya bara ọgaranya na nkwekọ na mgbakọ. Ogwe osisi bụ ihe bụ isi nke ngwongwo ogwe osisi, gụnyere fibreboard, particleboard na plywood, nke dị iche na osisi siri ike, nke nwere ike iji osisi mee ihe zuru oke dị ka obere osisi dayameta na ịchekwa akụ ọhịa. N'otu oge ahụ, ọ nwekwara ederede na agba nke osisi siri ike. N'etiti ọtụtụ bọọdụ ndị mmadụ mere, akụkọ mmepe nke plywood bụ nke kachasị ogologo. Plywood dịtụ mfe nhazi, obere nnukwu njupụta, ike a kapịrị ọnụ, ike nhazi ike na ihe ọkụkụ gas, ma nwee ike ịmị mkpụrụ na osisi nke osisi okike. Otú ọ dị, plywood na iji usoro a ga-eji nwayọọ nwayọọ hapụ formaldehyde n'efu, merụọ gburugburu ebe obibi, nke ka njọ ga-emetụta ahụike ndị mmadụ. Ya mere, otu esi emepụta plywood ka ọ ghara ịbụ "aldehyde-free"?
Kedu ihe bụ formaldehyde-free plywood?
Formaldehyde-free plywood na-ezo aka n'iji osisi ma ọ bụ osisi rụọ ọrụ dị ka akụrụngwa na usoro mmepụta, na-eji ihe ndị na-enweghị formaldehyde dị ka adhesives, dị ka anụmanụ na osisi protein, stachi, plastics, isocyanates, wdg, ma ọ bụ iji gbanwee aldehyde- nwere nrapado. belata formaldehyde nke emepụtara mgbe resin na-agwọ ya. Na nsonye, ​​a na-eji usoro ịme ihe eji eme ihe na osisi gluing usoro, a na-etinyekwa ihe mkpuchi n'ime osisi.
Ihe na-emetụta ihe si na formaldehyde emission si plywood
Formaldehyde emission si plywood na-tumadi emetụta akụkụ atọ, ya bụ, efere n'ichepụta, nsoje nhazi na mpụga na gburugburu ebe obibi. Efere n'ichepụta bụ tumadi nhọrọ nke nrapado na-ekpo ọkụ na ịpị usoro. Gburugburu ebe mpụga nwekwara mmetụta ụfọdụ na nsị formaldehyde, mmụba nke iru mmiri ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ ga-akwalite nsị formaldehyde si plywood.
Nkà na ụzụ na-emepụta nke plywood na-enweghị formaldehyde
Ihe ndị bụ isi bụ: (1) Mgbanwe nke nrapado aldehyde nwere. Mgbakwunye nke formaldehyde absorbent na usoro ngwakọta nke aldehyde-nwere nrapado nwere ike belata ọdịnaya nke formaldehyde n'efu. Ọ bụrụ na ejiri UF resin, urea nwere ike ịgbakwunye na batches iji belata nsị formaldehyde. (2) aldehyde-free nrapado. Dị ka ihe dị iche iche si kwuo, enwere ike kewaa nrapado na-enweghị aldehyde n'ime nrapado biomass, nrapado isocyanate na nrapado thermoplastic resin. (3) usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ. Tupu ịkwadebe plywood, ịkụda ihe mkpuchi ahụ na borax nwere ike belata hydrolysis nke UF resin ma belata nsị formaldehyde.
Enweghị ụzọ isi edozi nsogbu nke formaldehyde ntọhapụ site na plywood site na iji ndị na-eme mgbanwe iji belata ọdịnaya nke aldehyde na adhesives. iji biomass nrapado abughi nani isi ihe di nkpa kamakwa usoro mmekorita nke gburugburu ebe obibi, karia ihe eji eme ihe eji edozi soybean, starch adhesive na na.
gbanwetụrụ soybean dabeere nrapado. Soybean bụ ụdị osisi nwere uto ngwa ngwa, ọnụ ala na isi mmalite. Soybean protein bụ ezigbo ngwongwo ihe nwere ezigbo biocompatibility na enwere ike wedaa ya ala, nke nwere ike izere nsị nke gas na-egbu egbu dị ka formaldehyde. Agbanyeghị, soybean adhesive nwekwara ụfọdụ adịghị ike, dị ka adịghị ike mmiri iguzogide, obere nyagide ike wdg. Ya mere, iji meziwanye ntụpọ ndị a nke soybean nrapado, ọ dị mkpa iji gbanwee ya. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji usoro anụ ahụ dị ka kpo oku, egweri na oyi kpuchie soybean nrapado. Kpụrụ bụ ịgbanwe usoro nke protein soybean ka o wee nwee ike imetụta mgbochi mmiri nke protein soybean. E nwekwara usoro mgbanwe kemịkalụ dịka mgbanwe surfactant na mgbanwe urea, ụkpụrụ a bụ ịgbatị ịgbatị nke polypeptide yinye na protein ma kpughee ndị otu hydrophobic iji melite ike njikọ mmiri nke nrapado. (2) stachi dabere na nrapado. Ejirila mpempe akwụkwọ starch mee ihe na akwụkwọ mpempe akwụkwọ, mana ọ kwesịrị ka a gbanwee ya n'ihi mgbochi mmiri adịghị ike ya na enweghị ike izute mkpa nke ụlọ ọrụ ogwe osisi. Enwere ike imechi hydroxyl dị iche iche na starch nke starch site na oxidation, esterification na grafting, iji melite ike nrapado na mgbochi mmiri.
Thermoplastic resin nrapado
N'iji ihe eji eme polymer ihe eji eme ihe karia ihe eji eme osisi, o nwere ike kpochapu nsogbu nke formaldehyde, dika polypropylene na polypropylene gbanwere nwere ike iji plywood adhesives. Polypropylene bụ ụdị thermoplastic polymer, nke nwere ike jikọọ ya na osisi site na ịpị ọkụ ọkụ, mana ọ dabara naanị maka ime ụlọ ma sie ike iru ihe achọrọ nke efere n'èzí.
N'ihi ntakịrị nrụrụ ya, nnukwu usoro, nrụpụta dị mma yana arụmọrụ dị mma, a na-eji plywood n'ọtụtụ ebe, ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ arịa, kamakwa na iwu, mbupu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mmepụta plywood na-enweghị formaldehyde abụghị naanị ihe iwu obodo chọrọ, kamakwa ọ nwere ike imeziwanye ọnọdụ ime ụlọ ebe ndị mmadụ bi. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ usoro ọhụụ nwere ike iji ihe eji eme ihe polymer na ihe ndị dị na biomass dị ka adụkọta plywood, wee gbanwee ihe ndị a iji melite nguzogide mmiri ha na ike igwe bụ isi nke nyocha na imepụta plywood na-enweghị aldehyde.
Obodo Shuyao, Shangxu Town, Shuyang County, Jiangsu, China